UPR’s recommendations for ratification of CRC-OPAC, signing of ICCPR discussed – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
UPR’s recommendations for ratification of CRC-OPAC, signing of ICCPR discussed
A coordination meeting was held at the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw at 10 am on 14 February 2019 relating to the Universal Periodic Review (UPR) Working Group’s recommendations on the second Myanmar National Report of November 2015 which were to be implemented by two Working Committees headed by U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation.
The meeting was attended by officials concerned who are members of the Working Committees.
The first Working Committee is responsible for implementing 41 recommendations relating to accession/ ratification to core International Human Rights Conventions/ Treaties and the second is responsible for implementing4recommendations on the cooperation with UN Human Rights Mechanisms.
At the meeting, the Union Minister made the opening remarks and exchanged views with officials concerned on the matters to ratify the Optional Protocol to the CRC on the involvement of Children in Armed Conflict (CRC-OPAC), to sign the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and to conduct awareness trainings on the said treaties.
တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများကို ပုံမှန်သုံးသပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၏ အကြံပြု တိုက်တွန်းချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
(၁၄-၂-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများကို ပုံမှန် သုံးသပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် (UPR) လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြိမ် အစီရင်ခံစာအပေါ် အကြံပြုချက်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် ဦးဆောင်သော လုပ်ငန်းကော်မတီ (၂) ရပ်၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၀ဝ၀ နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ လုပ်ငန်းကော်မတီ (၂) ရပ်၏ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ရောက်ကြပါသည်။
အဆိုပါ လုပ်ငန်းကော်မတီ (၂) ရပ်အနက် ပထမလုပ်ငန်းကော်မတီမှာ အဓိက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး စာချုပ်များတွင် ပါဝင်/ အတည်ပြုရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက် (၄၁) ရပ်အား အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် လည်းကောင်း၊ ဒုတိယလုပ်ငန်း ကော်မတီမှာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ယန္တရားနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက် (၄) ရပ်အား အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် လည်းကောင်း တာဝန်ပေးအပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီးနောက်၊ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများအတွင်း ကလေးသူငယ် ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွင် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲ အခြေပြစာချုပ်သို့ အတည်ပြု ပါဝင်ရေး၊ အရပ်ဘက်နှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်သို့ လက်မှတ်ရေးထိုးရေးနှင့် ယင်းစာချုပ်များ ဆိုင်ရာ အသိပညာပေး သင်တန်းများ ကျင်းပရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။